Sababta Dr Aby Ahmed uu sidda deg deg ah ugu gaadha Jabuuti oo la ogaaday(Sawirro) – Xeernews24
Sababta Dr Aby Ahmed uu sidda deg deg ah ugu gaadha Jabuuti oo la ogaaday(Sawirro)
20. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ra’isalwasaaraha Dalka Itoobiya Dr,Abiye Axmed ayaa ku sugan Magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaana uu halkaas u tagay xallinta khilaaf u dhaxeeya dalalka ku jira urur Goboleedka IGAD.
Khilaafkan ayaa ka dhashay kulan dhawaan ka dhacay Magaalada Adis ababa ee caasimadda Dalka Itoobiya.
Kulankaas ayaa waxaa lagu go’aaminayay sida loo kala qaadanayo xilalka Guddoomiyaha iyo xoghayaha joogtada ah ee IGAD oo uu waqtigoodii dhamaaday.
Intii uu kulanka socday inta badan dalalka ku jira IGAD ayaa isku raacay in labada dal ee Kenya iyo Itoobiya oo kala hayay guddoonka iyo xoghayaha ay is weydaarsadaan.
Dr,Abiye Ahmed ayaa oo hadda ah Guddoomiyaha Urur Goboleedka IGAD ayaa lagu wadaa in uu xilkaas ku wareejiyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Kenyana waxaa ay wareejin doontaa xoghayaha guug ee IGAD oo uu ku fadhiyo Maxbuub Macalin oo Soomaali Kenyaan ah.
Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa qeyb ahaan ka soo horjeestay arrintaas waxaana ay siiba dowladda Jabuuti ku dooday in guddoonka iyo xoghayuhuba noqdaan wareegto marba dal qabto halka ay Kenya iyo Itoobiya kaliya iska heysanayaan.
kala duwanaanshahaas ayaa sababay in Ra’isalwasaaraha Dalka Itoobiya Abiye Axmed uu u tago dalka Jabuuti si uu Ismaaciil Cumar Geelle ugu qanciyo xil wareejinta lagu wado in bisha soo socota ka dhacdo Magaalada Nairobi.
Soomaaliya oo dooneysa xilka Xoghayaha IGAD ayeysan u suuragalin,waxaana jira in dowladda Soomaaliya lafteeda aysan qof rasmi ah magacaaban marka laga reebo Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda C/Salaan Hadliye Cumar oo xilkan doonayay intii ay jiray dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud.
Warkan wuxuu meesha ka saaray warar hora oo magaalada jabuuti la isla dhex wareegayeey oo ku saabsana booqshadda kadiska ah ee Dr,Abye Ahmed ku gaadhay magaalada Jabuuti oo suuqayadda Jabuuti lala xidhiidhnaayey xurguftay u dhaxaysa Soomaalidda iyo Canfarta ku dhaqaan dalk Itoobiya oo bilihii la soo dhaaday isku haystay dhul ku yaal Soomaali-state,dhawaan ayay ahayd marki is maamulka kililka Canfarta Itoobiya ay dawladda jabuuti ku eedeeyeen in dad Canfarta Itoobiya ku laysay dalka Itoobiya gudihiisa arinta oo ay isla dawladda Itoobya beenisay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Abye-iyo-IOG.jpg 720 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-20 14:22:062019-10-20 14:23:07Sababta Dr Aby Ahmed uu sidda deg deg ah ugu gaadha Jabuuti oo la ogaaday(Sawirro)
Sirta ka dambaysa in Aby Ahmed uu ku Guuleystay abaal marinta nabada Akhrista: Maalmihii Jaalle Siyaad Ee October 21, 1969-January 26, 1991.